रूसी संघ मा प्रवेश मा प्रतिबंध। प्रवेश निषेध जाँच
नागरिकता छ नगर्ने विदेशीहरू र व्यक्ति को विदेश बाट प्रवेश क्रम अभिशासित एक प्रमुख विनियमन रूपमा, सीमा पार गर्न संघीय व्यवस्था नम्बर 114. को प्रेरित, विषय एक भिसा र आफ्नो पहिचान पुष्टि कागजातहरू हुनुपर्छ। तर, केही अवस्थामा, आफ्नो उपस्थिति छैन पर्याप्त, त्यहाँ रूस मा प्रवेश मा प्रतिबंध छ किनभने छ। हामी अर्को उहाँले स्थापित छ जसमा अवस्थामा विचार र के यसको podolzhitelnost हुन सक्छ।
कारण सूची, यो प्रतिबन्ध शुरू हुन सक्छ जसमा एक व्यक्ति संघीय व्यवस्था नम्बर 114, लेख 26 मा निहित छ। आदर्श अनुसार, रूसी प्रतिबन्ध प्रविष्ट गर्न मा सेट गरिएको छ:
सेनेटरी दुरुपयोग र भन्सार सीमा नियन्त्रण प्रक्रिया। यस मामला मा, रूसी संघ मा प्रवेश मा प्रतिबन्ध तिनीहरूलाई सच्याउन काम गर्नेछ।
आफ्नो बारेमा गलत जानकारी को संचार, र देश भ्रमण गर्न।
विषय प्रशासनिक दायित्व रूस मा तीन वर्ष भित्र2पटक वा बढी ल्याउन। यस मामला मा प्रतिबंध छ, त्यहाँ3वर्ष पुरानो हो। अवधि को गणना अन्तिम आदेश प्रभाव को मिति देखि बाहिर छ।
30 दिन को राज्य मा अस्थायी बसाइ को अवधि को पूरा गरेपछि समाप्ति अघि नियमहरूको मूल को देश अघिल्लो यात्रा समयमा उल्लंघन। रूसी संघ मा प्रवेश मा प्रतिबन्ध यस मामला भएको विषय यसको सीमाना बाँकी थियो मिति देखि3वर्ष मा स्थापित गरिएको छ।
को उल्लंघन, बीच, सबै अवस्थामा, सीमितता नेतृत्व गर्दैन गर्न सक्नुहुन्छ।
मुश्किल नियम कला स्थापित छन्। 27 माथि व्यवस्था। अनुसार आदर्श संग, रूसी संघ मा प्रवेश मा निषेधाज्ञा प्रदान गरिएको छ:
त्यहाँ राज्य, स्वास्थ्य खतरहरुको / जनसंख्या एक खतरा छ।
देश वा आचरण विषयको को बहिष्करण मा निर्णय। यस्तो अवस्थामा, रूसी संघ गर्न प्रवेश मा प्रतिबंध र 10 भन्दा कम वर्ष (अवैध कार्यहरू पटक-पटक आयोग) (प्रासंगिक कार्य को जारी गर्न वृद्धि दिने एक उल्लङ्घनको) कम्तिमा पाँच वर्ष कार्य गर्नेछ।
readmission को क्रम मा एक विदेशी अवस्थामा एक व्यक्ति को आत्मसमर्पण निर्णय। यो देशमा प्रवेश र निवास को नियम उल्लङ्घन गर्ने संस्थाहरू विरुद्ध कार्य। यो प्रतिबन्ध यस मामला मा हटाउनका लागि सेट गरिएको छ, र deported नै अवधि हुनेछ।
त्यहाँ एक विषय जानिजानि चरित्र अपराध लागि दृढ विश्वास हो।
झूटा कागजात प्रदान गर्ने।
जरिवाना, कर र अन्य अनिवार्य भुक्तानी भुक्तानी देखि अघिल्लो भ्रमणहरू मा टालटुल।
रूसी संघ को क्षेत्रमा निर्वाह हालतमा एक भिसा, स्वास्थ्य बीमा नीति, साथै प्रमाण प्राप्त लागि आवश्यक कागजात को अभाव।
श्रम र सामाजिक व्यवस्था र सुरक्षा को क्षेत्र मा दुई वा बढी गम्भीर उल्लङ्घनको विगतका भ्रमणमा। यस मामला मा, रूसी संघ को क्षेत्र मा प्रवेश को निषेधाज्ञा5वर्ष को लागि स्थापित छ।
देशबाट प्रस्थान सर्तहरू उल्लङ्घन। यस मामला मा, निषेधाज्ञा अवधि को ठेस खुलारूपमा निर्भर र310 वर्ष देखि दायरामा गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि readmission व्यक्ति केही विभाग लागि केही भोग लागि प्रदान गर्दछ। यी यो कला मा निर्दिष्ट मैदान मा रोकियो जो आदर संस्थाहरू समावेश गर्नुहोस्। संघीय व्यवस्था नम्बर 115. को 32.5 उहाँले रूस देखि एक विदेशी व्यक्ति को स्वैच्छिक प्रस्थान छ। यदि यो राष्ट्रिय बजेटको खर्च मा लागू गरिएको थिएन, विषय पहिचान स्थापना मा readmission को समापन, साथै सहयोग प्रत्याभूति गरिएको छ। यस्तो व्यक्ति को रूस भ्रमणमा प्रतिबन्ध3वर्ष मा कार्य गर्नेछ।
प्रतिबंध को एक उपकरण रूपमा प्रतिबन्ध
प्रविष्टि मा प्रतिबन्ध अक्सर शत्रुहरू-अमेरिका विरुद्ध विभिन्न सरकारहरूलाई द्वारा प्रयोग गरिएको छ। विशेष मा, संयुक्त राज्य अमेरिका मा, धेरै युरोपेली र केही अन्य देशहरूमा जस्तै उपाय प्रस्तुत छ। यसरी, रूसी संघ नागरिकहरु को प्रवेश मा प्रतिबन्ध क्रिमीआ को annexation जोडिएको छन्। यसैबीच, पनि राज्य Duma हाम्रो प्रतिनिधि तर्फ खडा छैन। उदाहरणका लागि, यो विरोधी मनोवृत्ति प्रदर्शनी कि देशहरूको रूसी प्रतिनिधिको प्रवेश निषेध गर्न प्रस्तावित गरिएको थियो। प्रतिबन्ध प्रतिनिधि को स्थापना को लागि एउटा सरकारी आधारमा सार्वजनिक चासो एउटा खतरा र जनसंख्याको अधिकार को एक प्रकटीकरण भनिन्छ।
रूसी संघ मा प्रवेश को निषेधाज्ञा जाँच
आधिकारिक साइट FMS प्रतिबन्ध उपस्थिति वा अनुपस्थितिले बारे जान्नुहोस्। पृष्ठ मा, तपाईं क्षेत्रहरू भर्न चाहिने मेनुमा उपयुक्त सेवा चयन गर्नुहोस्, र त्यसपछि पर्छ। जानकारी रूसी प्रदान गरिएको छ। को रेखांकन शुरू छन्:
नम्बर र पूरा पछिल्लो समय रूसी संघ प्रवेश भएको थियो जुन मा कागज को प्रकार, राज्य वा संगठनको नाम जो यो प्राप्त भएको थियो।
तपाईंको अनुरोध पठाउनु अघि, चित्रमा देखाइएको कोड प्रविष्ट गर्नुहोस्। प्रणाली डाटाबेस उपलब्ध जानकारी प्रदान गर्नेछ। यो डाटा सन्दर्भको लागि प्रदान गरिन्छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। यो वास्तविक अवस्था फरक हुन सक्छ भन्ने हो। वर्तमान डाटा लागि यो व्यक्ति मा संघीय माइग्रेसन सेवा लागू गर्न उचित छ।
imposing प्रतिबन्ध को विशेष
प्रवेश प्रतिबंध लगान अधिकार भएको राज्य शरीर गर्न, संघीय माइग्रेसन सेवा, को FSB, को आंतरिक मंत्रालय, संघीय सुरक्षा सेवा, संघीय औषधि नियन्त्रण सेवा र अरूलाई को एक नम्बर समावेश गर्नुहोस्। यो कि यी अधिकारीहरूले देश मा एक व्यक्ति को जीवन बारे व्यापक जानकारी प्राप्त गर्न आवश्यक छैन भने हुनुपर्छ। यो डेटाबेसमा उपस्थित कि जानकारी को आधारमा प्रतिबंध लगान आवेदन। परिवार, छोराछोरी, नातेदार, व्यक्तिगत विषय को विशेषताहरु सम्बन्धी अन्य विवरण सोचिरहनुभएको, बाहिर छैन। एजेन्सी द्वारा अधिकृत व्यक्ति सूचित पर्छ सीमा को परिचय को तथ्यलाई यो कसलाई लागू गरिन्छ गर्न। तथापि, व्यवहार मा सूचना प्रक्रिया एक मात्र औपचारिकता छ। यस सन्दर्भमा, प्रतिबन्ध विषय अस्तित्व नै राज्य सीमाना को पार मा, छुट्टी देखि फिर्ता पछि, जबकि यसको क्षेत्रमा र, RVP आकार दर्ता prolonging र यति मा, रूस मा काम गर्न आउन भेट्टाउनुहुन्छ। गलत अर्थ जोगिन, विशेषज्ञहरु समय समयमा साइट FNS पठाउन सिफारिस गर्छौँ। प्रवेश मा प्रतिबन्ध जाँच मात्र अप्रिय परिस्थिति रोक्न, तर पनि साझेदार वा अन्य इच्छुक पक्षहरूले सूचित समसामयिक उद्धार गर्न। यो विशेष गरी विदेशी व्यापार गतिविधि महत्त्वपूर्ण छ।
प्रविष्टि मा प्रतिबन्ध हटाउने?
एक एकदम साधारण राय तपाईं स्थान मा प्रतिबन्ध समाप्त गर्न सक्ने छ। उदाहरणका लागि, FMS विभाग मा विमानस्थल, सीमा नियन्त्रण को क्षेत्र मा मा। तर, यो राय गलत छ। यसबाहेक, रूस मा प्रतिबन्ध प्रविष्टि को उठाने छैन कर्मचारी विभाग को जिम्मेवारी हो। कानून एक बरु जटिल प्रक्रिया को लागि प्रदान गर्दछ। अनुसार नियमहरूमा संग प्रतिबन्ध को उठाने संरचना मा हुन सक्छ लागि लागू गर्न, यो त सिधै आफ्नो स्थानमा स्थित छ जो अदालत, गर्न, सुरु गरिएको छ। अभ्यास देखाउँछ रूपमा, प्रश्न मा दक्ष अधिकारीहरूले निर्णय गर्दैन, र मुद्दा इन्कार को एक निश्चित समय पछि। अनिवार्य, तपाईं अदालत मा स्थिति समाधान गर्न सक्नुहुन्छ।
को कार्यवाही अर्को राज्य को नागरिक को चासो प्रतिनिधित्व गर्ने मन राख्न मात्र एक औपचारिक उच्च शिक्षा संग वकील हकदार छ। यस्तो आवश्यकता लेख 55 कैस स्थापित गरिएको छ। यो कि नातेदार र spouses एक अर्को डिग्री को अभाव मा सुरक्षा प्रदान गर्न सक्छ हो। यस्तो bureaucratic अवरोध संग बैठक धेरै विदेशीहरू, लडाई जारी राख्न र आफ्नो देश फर्कन छैन निर्णय। तर केही रूस मा अवैध प्रवेश गर्न प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। क्याच violators को मामला मा जेल समय वा आचरण सामना।
अनुभवले देखाउँछ रूपमा थुप्रै अवस्थामा रूसी संघ भ्रमणमा प्रतिबन्ध उचाल्न यो सम्भव छ। यसबाहेक, प्रक्रिया दुई तीन महिनाको लागि गर्न सकिन्छ। भएको अवस्था संग व्यवहार गर्नुभयो, तपाईं कानुनी रूपमा रूसी संघ को क्षेत्रमा, काम र शान्ति बस्न रहन सक्छ। निस्सन्देह, उपयुक्त आधार समस्या समाधान हुनुपर्छ। खातामा देश मा एक विदेशी अन्तिम रहन को अवस्था लिइरहेको। आवश्यक उपाय मध्ये एक र पुनरावेदन सञ्चालन उपयुक्त संकल्प प्रक्रिया मानिन्छ। धेरै अवस्थामा, जब मान्छे आफ्नै केही कदम लिन, अक्सर सही दृष्टिकोण प्रतिबन्ध अन्तर्गत पायो छ जो व्यक्ति को पक्षमा स्थिति समाधान सक्ने बाहिर जान्छ सुरु, तर हालियो उद्यम अवरोध भेटे। अक्सर कठिनाइ मानिस स्थिति भ्रममा थालेका छन् भन्ने तथ्यलाई देखि उत्पन्न। यो जडान, यो एक योग्य वकील परामर्श गर्न उचित छ। प्रतिबन्ध व्यय व्यापार वा विषय को प्रतिष्ठा को नोकसान गर्न सक्छ भने यो विशेष गरी साँचो हो।
धेरै मान्छे को लागि प्रवेश मा प्रतिबंध ठूलो समस्या छ। स्थिति प्रतिबन्ध अस्तित्व को चिन्ने होइन ती लागि विशेष गरी कठिन हुन्छ। हाल सार्वजनिक जानकारी डाटाबेस, सबै लगाएको प्रतिबन्ध बारे जानकारी जसमा। यसलाई समय समयमा FMS को वेबसाइट मा जानकारी जाँच गर्न उचित छ। सामान्य मा, मात्र होइन सीधा सीमाना मा, तर पनि रूसी संघ को क्षेत्रमा एक रहन को लागि कानूनी आवश्यकताहरू, पूरा गर्न पर्याप्त प्रवेश प्रतिबन्ध को कर रोक्न। यो देश मा एक व्यक्तिले आफ्नो रहन को वैधता साबित सबै कागजातहरू हुनुपर्छ भन्ने हो। यो संविधान र संघीय कानूनको को प्रावधान पालन गर्न महत्त्वपूर्ण पनि छ। विषय एक समय तरिका उल्लंघन प्रतिबद्ध र normative कार्यहरू गरेर उहाँलाई लगाएको को दायित्व पूरापूर पालन गर्न छैन भने, कुनै prohibitions यसलाई कुनै पनि प्राप्त छैन। तदनुसार, यो राज्य बाहिर निकालिएको भइरहेको को likelihood बारेमा चिन्ता बिना शान्ति बस्न सक्छ।
VALERY Gerasimov: जीवनी, फोटो र जीवनको रोचक तथ्य
मिश्रित सैन्य पेन्सन, र नागरिक पेंशन: विशेषताहरु
विशेष क्षेत्रमा लक्जरी जटिल - "Dessole Pyramisa Sahl Hasheesh"
तीन हात - व्यवहार जो प्रतिमा,
क्लोनडिक - यो के हो? अर्थ
को "सही" घरेलु शौचालय छनौट
आफ्नै हातले क्रेप कागज बाट पौराणिक फूल
Madrasah: के र कहाँ बाट आएको?
दबाइ 'स्ट्रेप्टोकाइड' (पाउडर): प्रयोग, विनाश, सीमाहरू